Qaranka Argentina oo raba in Messi ku soo laabto - BBC News Somali
Qaranka Argentina oo raba in Messi ku soo laabto
Image caption Messi ayaa horay u shaaciyay in uu ciyaaraha caalamiga ah ka fariistay
Tababaraha cusub ee Argentina Edgardo Bauza ayaa raba in uu Lionel Messi ku dhiirigaliyo in uu ka noqdo kafariisashada ciyaaraha caalamiga ah.
Messi oo 29 jir ah oo afka hore uga dheela Barcelona ayaa bishii lixaad ee sanadkan go'aankaas qaatay, kaddib markii uu ku guul daraystay in uu kooxdiisa u dhaliyo gool ku laad ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Copa America oo dhexmartay oo guushu ay raacday Chile, taas ayaana noqotay ciyaartii afraad ee kama dambays ah ee uu guuldaro la kulmo Messi muddo sagaal sano ah.
Bauza, oo badalay Gerardo Martino ayaa sheegay in muhiimadiisu ay tahay in uu Messi kala hadlo kubadda cagta.
"Sidaas daraadeedna ay suurtagal tahay in loo yeero ciyaaraha soo socda."
Ciyaaraha isreebreebka ee koobka adduunka ee 2018 oo dhacaya todobaadka koobaad ee bisha soo socota ee sagaalaad Argentina waxay gurigeeda ku martigalin doontaa Uruguay waxayna marti u noqon doonaan xulka Venezuela.
Kaalinta saddexaad ayay kaga jiraan tobanka kooxood ee Koonfurta Ameerika iyaga oo haysta 11 dhibcood kaddib lix ciyaarood oo ay safteen waxay labo dhibcood ka hooseeyaan Uruguay iyo Ecuador oo hogaaminaya.
Marka 18 ciyaarood la dheello afarta kooxood ee u dhibco bata ayaa Ruushka tagi doona si ay koobka adduunka uga dheelaan, kaalinta shanaad kooxda gashana is reebreeb qaaradda ah ayay gali doontaa.
Bauza mar wax laga waydiiyay Messi ayuu ku daray in uu rabo in uu fikirkiisa la wadaago uuna ogaado waxa ciyaaryahanka la quman markaasna uu arko waxa ka soo baxa.
Wuxuu sheegay in uu dareensan yahay go'aanka uu qaatay ciyaaryahanku isaga oo ciyaar kama dambays ah laga badiyay balse uu ka laaban karo.